Ogaden News Agency (ONA) – Shirweynihii Jaaliyada S.Ogaadeeniya ee magaalada Edmonton oo si habsami ah u qabsoomay
Shirweynihii Jaaliyada S.Ogaadeeniya ee magaalada Edmonton oo si habsami ah u qabsoomay
Posted by ONA Admin	/ May 20, 2014
Waxaa maalinimadii axada oo taariikhdu ahayd 18/may shir balaadhan isugu yimid jaaliyada S.Ogaadeeniya ee magaalada Edmonton kaas oo ka dhacay hoolka wayn ee Belwin Community Hall waxaana shirka xidhiidhiye ka ahaa mudane Faarax mursal.
Waxaa lagu furay shirka wacdi diini ah oo uu soo jeediyey Sheekh Cusmaan oo ka mid ah culumada Soomaaliyeed kuwooda ugu aqoonta badan dhinaca diinta gobolka Alberta ee Canada, wuxuuna aad uga hadlay in uu waajib yahay xaqna uu yahay halganka ka socda Ogaadeeniya isagoo usoo qaatay aayado quraana iyo axaadiis farabadan oo muujinayaa arintaa, wuxuuna kula dardaarmay umada Soomaaliyeed ee shirkaa kasoo qayb qashay in ay si buuxda u taageeraan shacabkaa xaq u dirirka ah. Ilaahay ha inagu anfaco wacdigaa diiniga ee qiimaha badan.
Ka dib; Waxaa lagu soo dhaweeyey kusimaha gudoomiyaha jaaliyada Edmonton ahna madaxa abaabulka jaaliyada halgame Maxamed Shaqlane oo ka soo jeediyey hadal kooban oo qiimo badan isagoo daaha ka rogay inuu shirku furan yahay isla markaana wuxuu u mahadceliyey sida wanaagsan ee umada Soomaaliyeed uga soo qayb gashay shirka iyo sida ay goor walba u garab taagan yihiin halganka hubaysan ee JWXO hormoodka u tahay.
Isuduwaha jaaliyadaha Canada mudane Yuusuf Ismaaciil oo hadalka qaatay ayaa khudbad aad fiican halkaa ka soo jeediyey isagoo ka warbixiyey jaaliyadaha Canada wax qabadkooda iyo maraaxiilaha kala duwan ee ay soo mareen wuxuu kaloo carabka ku dhuftay in ay jaaliyad cusub ku soo biirtay kana curatay gobolka Manitoba gaar ahaan magaalada Winnipeg .
Waxaa kaloo halkaa hadal waxtar leh ka soo jeediyey madax ka tirsan golaha dhexe ee Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogaadeeniya mudane Maxamed Macalin oo ka warbixiyey xaalada gudaha Ogaadeeniya iyo dhibaatada joogtada ah ee gumaysigu ku hayo maalin walba shacbiga dulman ee S.Ogaadeeniya wuxuu kaloo cambaareeyey dawlada Jabuuti ee uu madaxda ka yahay Ismaaciil Cumar Geele oo shacbi masaakiin qaxooti ah gacanta u galiyey gumaysiga ma naxa ah.
Shirka waxaa si diiran loogu soo dhaweeyey DR Maxamuud Ugaas oo ah aqoonyahan u dhashay Ogaadeeniya isla markaana ka mid ahaa mudanayaashii ka qayb galay wada hadalkii u dhexeeyay JWXO iyo Ethoipia Laguna ee lagu qabtay dalkaKenya. DR Maxamuud Ugaas wuxuu soo bandhigay barnaamij aad u dheer oo uu ugu magac daray jaahwareerka siyaasadeed ee Geeska Afrika kaas oo ku wajahnaa soomaaliya, Itobiya iyo Ogaadeeniya, wuxuuna soo qaatay muuqaalo dhab ah oo goos goos ah taas oo ay caalamka iyo joornaalada aduunku ka diyaariyeen siyaasada Geeska Afrika gaar ahaan Ethiopia, tanina ay markhaati cad u tahay sheegashada beenta ah ee Itobiya mar walba sheeganayso horumar been ah oo aan jirin. Warbixintiisuna waxay qaadatay mudo aad u dheer oo ku dhawayd saacad iyo badh, runtiina martidii ka soo qaybgashay shirka wuxuu u soo bandhigay barnaamij aad u tayo fiican oo hadii Soomaali ka faa’iidaysanayso wax weyn u tari lahaa isagoo tilmaamay in maanta Soomaali ay gacanta u gashay gumaysiga Itobiya.
Wuxuu kaloo soo hadal qaaday maanta halganka Ogaadeeniya ka socda in uu marayo meeshii ugu saraysay Ethiopiana ay burburayso doorashadan soo socota 2015 cadaynteediina lahayo sidaa daraadeed wuxuu ku soo gabagabeeyey waa in qofkastaa oo Soomaali ahi halkanka ka socda ogaadeeniya si buuxda loo taageeraa.
Waxaa makaroofanka qaatay Axmed Haadi oo ah oday ruug caadaa Soomaaliyeed oo in badan la soo shaqeeyey dawladii hore ee soomaaliya khibradna u leh cadowga soo jireenka ahaa ee Soomaaliyeed, wuxuu umadii halkaa isugu timid ku booriyey in aanay waxba indhaha ka qarsan runtuna ay isugu soo biyo shuban in umada Soomaaliyeed meelkasta ha joogtee aanay cadow kale lahayn ee meel looga soo wada jeedsado cadowgaa gaamuray ee Itobiya.
Shirkaas oo mudo dheer socday wuxuu ku soo dhamaaday jawi aad u fiican oo aad ka dheehan karto ka soo qayb galayaashii.